BANKY FOIBEN’I MADAGASIKARA : Ho tapitra amin’ity taona ity ny fampiasana ireo vola teo aloha
Tamin’ny taona 2017 no namoaka vola vaovao ny teo anivon’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Hatramin’izao dia mbola miara-miasa amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina ireo vola vaovao sy ny teo aloha ireo. Heverina, araka ny fanazavana voaray , fa amin’ny faran’ity taona ity no fara-fampiasana ireo vola teo aloha. 24 mars 2019
Nandritra ny roa taona izay no nisian’ny vola vaovao, ravim-bola dimy Arivo Ariary, arivo Ariary, roa arivo Ariary, dimy Arivo Ariary, iray alina Ariary ary roa alina Ariary mitambatra. Mba hialana amin’ny ho fahasahiranan’ireo izay manan-tahiry amin’ireo vola teo aloha dia mbola azo nampiasaina manerana ny tanin’I Repoblikan’I Madagasikara ilay vola vaovao sy ireo vao natonta.
Araka ny fanazavana noentin’ny governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara, Alain Hervé Rasolondraibe dia tsy hihoatra an’ity taona ity intsony ny fampiasana ireo vola teo aloha. Amin’izao fotoana izao, araka ny antontan’isa nomeny dia efa ny 65%-n’ny vola mihodina eto Madagasikara dia saika efa ireo vola vaovao ireo avokoa. Any amin’ny Faritra hafa aza dia efa mahatratra 85% izany, izany hoe efa ireo ravim-bola vaovao avokoa no ampaisain’ny olona. “Efa ho roa taona izao, tamin’ny taona 2017 isika no nanomboka namoaka an’ireo vola vaovao ireo.
Efa nataontsika tsikelikely ny asa, ny politika noraisin’ny Banky Foibe tao anatin’izay dia ny fanovana miandalana ny vola taloha sy ny vola vaovao. Efa tena miroso isika amin’izao fotoana izao satria raha ny kajy dia efa mihoatra ny 65% manerana an’i Madagasikara ny vola vaovao no miasa, eo amin’ny 35% izany sisa. Any amin’ny Faritra sasany jerena fa tena efa miakatra izay satria mahatratra hatrany amin’ny 85%. Azo heverina araka izany fa efa tsy ho ela intsony dia azontsika hatao no manajanona ilay vola taloha, tsy hihoatra ny faran’ity taona ity”, hoy ny fanazavana noentin’ny governoran’ny Banky Foiben’i Madagasikara.
Ankoatr’izay dia nitondrany fanazavana ihany koa fa hivoaka tsy ho ela ny lalàna vaovao momba ny banky, hivoaka tahaka izany ihany koa ilay famatsiam-bola FEC na “Fond Elargie de Credit” andiany fahaefatra. Ity farany izay ahazoana famatsiam-bola 43,8 tapitrisa dôlara ka ny ampahany amin’io dia ho tantanin’ny Banky foibe ary ny ampahany kosa dia hanohanana ny fanampiana ny teti-bolam-panjakana. Ny FEC izay fiaraha-miasa eo amin’ny Banky Foibe sy ny tarim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Ny sabotsy lasa teo moa dia nanatanteraka fambolen-kazo teny Anjeva ny teo anivon’ny fianakaviam-ben’ny Banky Foiben’i Madagasikara. Nandritra izany no nitondrana ireo fanazavana rehetra ireo.